Faahfaahin Dheeraad Ah: Ciyaartoyga Soomaaliga Ah Ee Liverpool Heshiiska La Gashay - Jigjiga Online
HomeSomalidaFaahfaahin Dheeraad Ah: Ciyaartoyga Soomaaliga Ah Ee Liverpool Heshiiska La Gashay
“Laacibkan qadka dhexe ee 18 jirka ah wuxuu kooxda ka tirsanaa illaa markii uu lix jirka ahaa, wuxuuna seddax sano ka hor billaabay inuu kooxda u ciyaaro”, ayaa lagu yiri warsaxaafadeed Liverpool ay soo saartay.
“Wuxuu ciyaaraha ku billaabay tartanka FA-ga ee dhallinyarada, wuxuuna kullankii ugu dambeeyay dhaliyay gool ku laad ay Liverpool ku qaaday koobka. Waxay ahayd markii ugu horeysay muddo 12 sano ah oo kooxda ay heerkaa gaarto”.
Steven Gerrard wuxuu toddobaadki hore sheegay “In dhaab dhismeedka Cabdi uu u dhigmo ciyaartooyda waaweyn”.
Wuxuuna Gerrard intaasi raaciyey “Cabdi inuu orodka aad ugu wanaagsan yahay, uuna lugo dhaadheeryahay. Wuxuu ka dhex muuqday kooxdiisa iyo ciyaartooyda Keydka, sidaa darteed waxaan isku dayeynaa inaan Cabdi ku boorino sidii uu u noqon lahaa mid ciyaaraha ka qayb qaato.”
“100/100 waan ku raacsanahay, Shariif 17- jir ah inuu tababar uu dhawaan ku qaatay Akaadeemiga kooxda si uu uga mid noqdo kooxda Liverpool.
“Billow aad u wanaagsan ayaan ku billaawday xilli ciyaareedkan, laakiin ciyaartooy kasta wuxuu leeyahay xirfad ciyaareed oo u gaar ah aniguna waxaan wadaa dadaal inta awooddeyda ah.”
“Steven iyo tababaraha wax badan ayey igu dhiirrageliyaan ciyaartoy ahaanna aad ayaan ugu baahanahay. Aniga ahaan si aan xirfaddeyda ciyaareed u soo saaro oo aan ciyaaraha heerki looga baahnaa uga gaaro, dhiirragelinta noocaasi waan u baahanahay. Steven wuxuu marwalba igala shaqeeyaa sidi aan xirfaddeyda goor walba ku hormarin lahaa.”
Wuxuuna wakhtiga carruurnimadiisa u la soo qaatay bulshooyinka St Margaret’s iyo Dugsiga hoose Lawrence, inta badan xilliyada uu fasaxa yahay isaga iyo walaalkii oo 9 jir ah kana isaga ayay wada ciyaari jireen kubadda cagta.
Taageerayaal badan ayaan lahayn aniga iyo walaalkeey markaan kubadda wada ciyaari jirnay. Waxaanna ahaa qof adag guul darrada ama in la iga raayana ma jecleen” ayuu yiri ciyaartooyga da’da yar Shariif.
Marka ay da’diisu lix jir gaartay, Shariif wuxuu nasiib u helay inuu tababar uu ka helo Liverpool wuxuuna si toos ah uu ugu biiray akaadamiyada kubadda cagta Liverpool.
“Marwalba waxaan u fiirsadaa Cabdi Shariif. Markasta oo uu ciyaaraya si gaar ah ayan u daawadaa ciyaaraha soo bandhigo, xeeladihiisa, xirfaddiisa, dabeecadihiisa, sida ay uga go’an tahay inuu kooxda ku soo biro, Shariff wax weliba oo looga baahnaa ciyaartooy waa u leeyahay, gaar ahanna xirfadda ay kooxdan Liverppool u baahnayd waa uu leeyahay.”